Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Mongolia မွန်ဂိုးလီးယား
ကနေ့တော့ ဘူတန်ကနေ တိဘက်၊ နောက် မွန်ဂိုလွိုက်။ အခု မွန်ဂိုလီးယားကို တင်ပါဦးမယ်။ တိဘက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း လာမားနဲ့ ကျွန်တော်ရုပ်ဆင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ အခုပုံထဲက မွန်ဂိုနဲ့လည်း ခပ်ဆင်ဆင်။
ကျွန်တော် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်ကနေ ၈ ရက်နေ့တွေကကျင်းပတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်အင်တာနေရှင်နယ် အစည်းအဝေးတက်ဖို့အတွက် မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ၊ အူလန်ဘာတာမြို့တော်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မွန်ဂိုးလီးယားကိုရောက်ရတာက စိတ်လှုပ်ရှားမှုတမျိုးဖြစ်ရပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေကို မွန်ဂိုလွိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ မွန်ဂိုတွေဟာ အာရှသမိုင်းမှာ လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ အလယ်တန်းမှာ ဂျင်ဂစ်ခန်အကြောင်း သင်ခဲ့ရတယ်။ သူကနေ ၁၂ဝ၆ ကတည်းက မွန်ဂိုအင်ပါယာကိုထူထောင်ခဲ့တာပါ။ ဂျင်ဂစ်ခန်ရဲ့ မြေးတော်သူ ကူဘလေခန်ကတော့ တရုပ်ပြည်ကို အောင်နိုင်ပြီး ယွန်မင်းဆက်ကို ထူထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်မင်းဆက်ကုန်တော့မှ မွန်ဂိုတွေက မွန်ဂိုးလီးယားကို ပြန်ကြတယ်။ ၁၆ ရာစုကစပြီး တိဘက်ကနေလာတဲ့ မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားလာပြီး၊ အရွယ်ရောက် ယောက်ျား ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက် သင်္ကန်းဝတ်ကြတယ်။ အခုတော့ နည်းပါတယ်။
မန်ချူးတွေက တရုပ်ပြည်မှာ ကွင်န်မင်းဆက်ထူထောင်ပါတယ်။ ၂၉-၁၂-၁၉၁၁ နေ့မှာ တရုပ်နဲ့တွဲထားရာကနေ ကွင်န် မင်းဆက်အောက်ကနေ မွန်ဂိုးလီးယားက လွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ တော်လှန်စစ်က နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝ ကျော် ကြာခဲ့တာပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး မကြာခင် ဆိုဗီယက်ယူနီယန်က လွှမ်းမိုးလာပြီး၊ ၁၉၂၄ ခုနှစ်မှာ ဆိုဗီယက်ရဲ့စွယ်ပွား နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ၁၉၈၉ မှာ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၉၂ မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရှိလာပါတယ်။
သူတို့ယဉ်ကျေးမှုက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ မွန်ဂိုယီးယားလူမျိုးတွေရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံဟာ ကနေ့အထိ နော်မန်းဒစ် သို့မဟုတ် တစိတ်တပိုင်း နော်မန်းဒစ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ နော်မန်းဒစ်လူမျိုးဆိုတာ နေရာအတည်တကျ မနေကြပဲ ရေကြည်ရာမြက်နုရာကို ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တယ်။ မွေးမြူရေးနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတယ်။ မြင်းကောင်းတွေ ထွက်တယ်။
ပုံထဲမှာပါတဲ့ ရွက်ဖျင်တဲအိမ်တွေနဲ့ စားကျက်မြက်ခင်းကျယ်ကြီးတွေမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ နွားနို့နဲ့ ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကိုသာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့လက်ရာ အစားအသောက်တွေနဲ့ တည်ခင်း ဧည့်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သွားလည်ကြတဲ့တဲအိမ်ဘေးမှာ ဂြိုလ်တုစလောင်းရှိတယ်။ ဆိုလာပြားရှိတယ်။ တီဗွီရှိတယ်။
ပုံထဲမှာ ကျွန်တော့်ဘယ်ဖက်က မွန်ဂိုးလီယန်စကားပြန်နဲ့ ညာဖက်က အရှေ့တီမော ခေါ် တီမောလက်ဆေးက အမတ်တယောက်ပါ။ ကျွန်တော် စင်ပြိုင်အစိုးရတာဝန်နဲ့ အရှေ့တီမောမှာ တလတာနေရတော့ သူနဲ့ပြန်တွေ့ရပါတယ်။ မွန်ဂိုလူမျိုးတွေက ခင်မင်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေကို တွေ့ရသလိုပဲ။ ဂျင်ဂစ်ခန်ပုံနဲ့စာအုပ်တွေ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ မွန်ဂိုနော်မန်းဒစ်လူမျိုးတွေရဲ့တဲနားမှာ ဆိုလားပြာထောင်ထားသလို ကျွန်တော် ဇာတိမင်းရွာကို အလည်ပြန်တော့ အဲလိုပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်။
1. Mongol and Myghal Emperors မွန်ဂို အင်ပါယာနဲ့ မူဂေါလ် အင်ပါယာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/mongol-and-myghal-emperors.html
2. Mongol invasions of Burma မြန်မာနိုင်ငံကို မွန်ဂိုကျူးကျော်မှုများ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/mongol-invasions-of-burma.html
3. Mongolia မွန်ဂိုးလီးယား https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/mongolia.html
4. Mongoloid and Tibeto-Burman မွန်ဂိုလွိုက် နှင့် တိဘက်တို-ဘာမင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/mongoloid-and-tibeto-burman.html
5. Mongoloid မွန်ဂိုလွိုက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/mongoloid.html
ကျောင်းစဖွင်ပြီလို့ရေးတော့ မေးပါတယ်။ ဘာသင်တဲ့ကျောင်းလဲ ဆရာတဲ့။ ကျောင်းအကြောင်း နည်းနည်း နည်းနည်း ရေးထားပြီး။ တယောက်က မေးဖူးတယ်။ အခုမှ...